ဘိုငျယနျမွူးနဈကို အဌားနဲ့ နောကျတဈကွိမျပွနျလညျရောကျရှိဖို့ နီးစပျနတေဲ့ ဂြူဗငျတပျတောငျပံကစားသမား ဒေါကျက လပျ ကျောစတာ – Myan Ball
ဂြူဗငျတပျမှာ ပုံမှနျပှဲထှကျခှငျ့ရဖို့ ရုနျးကနျနရေတဲ့ တောငျပံကစားသမား ဒေါကျကလပျကျောစတာအနနေဲ့ ဘိုငျယနျမွူးနဈ ကို အဌားနဲ့ တဈကြော့ပွနျရောကျရှိဖို့ နီးစပျနပွေီလို့ Goal သတငျးဌာနက အတညျပွုခဲ့ပါတယျ။ အသကျ ၃၀ ရှိပွီဖွဈတဲ့ ဒေါကျကလပျကျောစတာ ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှဈက ၂၀၁၇ ခုနှဈအထိ ဘိုငျယနျမွူးနဈ မှာ ကစားခဲ့ဖူးသူလညျး ဖွဈတာကွောငျ့ အသငျးဟောငျးမှာ ခွစှေမျးပွနိုငျမယျလို့ ထငျကွေးပေးခံနရေသူလညျး ဖွဈပါတယျ။
၂၀၁၈ ခုနှဈတုနျးက ဂြူဗငျတပျကို ယူရိုသနျး ၄၀ နဲ့ ရောငျးခခြဲ့တဲ့ ဒေါကျကလပျကျောစတာအတှကျ အဌားနဲ့ ပွနျလညျချေါ ယူခြိနျမှာ ဘိုငျယနျမွူးနဈဟာ ယူရို ၆ သနျးပေးခဲ့ရတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ ပွီးခဲ့တဲ့ရာသီက အသငျးအတှကျ ပွိုငျပှဲစုံ မှာ သုံးဂိုးသာသှငျးယူနိုငျခဲ့ပွီး ဂိုးဖနျတီးမှု ခုနှဈကွိမျသာရှိခဲ့တဲ့ ဒေါကျကလပျကျောစတာကို ဂြူဗငျတပျအနနေဲ့ အဌားခရြ တာက ဖီအိုရငျးတီးနားတိုကျစဈမှူး ခြီယဆောကို ချေါယူဖို့အတှကျကွောငျ့လို့လညျး သတငျးတှကေ ဖျောပွခဲ့ပါတယျ။
ဂြူဗငျတပျက ဒေါကျကလပျကျောစတာကို အပွီးသတျရောငျးခဖြို့အတှကျ အလိုရှိခဲ့တာဖွဈပမေယျ့ ကစားသမားကတော့ အဌားနဲ့ သှားရောကျကစားပွီးမှ အပွီးသတျပွောငျးရှဖေို့ အလိုရှိခဲ့တာကွောငျ့ ပထမတဈနှဈကို အဌားနဲ့ ပွောငျးရှခေဲ့တာ ဖွဈတယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ ဒေါကျကလပျကျောစတာဟာ ဘိုငျယနျမွူးနဈနဲ့ ဘှနျဒကျလီဂါခနျြပီယံ နှဈကွိမျ၊ ဂြူဗငျ တပျ နဲ့ စီးရီးအခေနျြပီယံ သုံးကွိမျရရှိထားခဲ့သူလညျး ဖွဈပါတယျ။
Douglas Costa (Juventus FC) during the Serie A football match between FC Internazionale and Juventus FC at Giuseppe Meazza stadium on April 28, 2018 in Milan, Italy. Final results: 2-3. (Photo by Massimiliano Ferraro/NurPhoto via Getty Images)
ဂြူဗငျတပျအသငျးဟာ ဖီအိုရငျတီးနားက ခြီယဆောကို ချေါယူဖို့အတှကျ ဒေါကျကလပျကျောစတာအပွငျ ရူဂါနီကို ရနျး နကျဈ၊ ဒီဆီဂလီယိုကို လိုငျယှနျအသငျးတှထေံ အဌားခခြဲ့တယျလို့လညျး သိရပါတယျ။ အခွားသတငျးဌာနတဈခုကတော့ ဖီအိုရငျတီးနား တိုကျစဈမှူး ခြီယဆောအနနေဲ့ ဂြူဗငျတပျအသငျးကို ပွောငျးရှဖေို့အတှကျ သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပွီးလို့ လညျး ဖျောပွနကွေပါတယျ။
ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ကို အဌားနဲ့ နောက်တစ်ကြိမ်ပြန်လည်ရောက်ရှိဖို့ နီးစပ်နေတဲ့ ဂျူဗင်တပ်တောင်ပံကစားသမား ဒေါက်က လပ် ကော်စတာ
ဂျူဗင်တပ်မှာ ပုံမှန်ပွဲထွက်ခွင့်ရဖို့ ရုန်းကန်နေရတဲ့ တောင်ပံကစားသမား ဒေါက်ကလပ်ကော်စတာအနေနဲ့ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် ကို အဌားနဲ့ တစ်ကျော့ပြန်ရောက်ရှိဖို့ နီးစပ်နေပြီလို့ Goal သတင်းဌာနက အတည်ပြုခဲ့ပါတယ်။ အသက် ၃၀ ရှိပြီဖြစ်တဲ့ ဒေါက်ကလပ်ကော်စတာ ဟာ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ၂၀၁၇ ခုနှစ်အထိ ဘိုင်ယန်မြူးနစ် မှာ ကစားခဲ့ဖူးသူလည်း ဖြစ်တာကြောင့် အသင်းဟောင်းမှာ ခြေစွမ်းပြနိုင်မယ်လို့ ထင်ကြေးပေးခံနေရသူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
၂၀၁၈ ခုနှစ်တုန်းက ဂျူဗင်တပ်ကို ယူရိုသန်း ၄၀ နဲ့ ရောင်းချခဲ့တဲ့ ဒေါက်ကလပ်ကော်စတာအတွက် အဌားနဲ့ ပြန်လည်ခေါ် ယူချိန်မှာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်ဟာ ယူရို ၆ သန်းပေးခဲ့ရတယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီက အသင်းအတွက် ပြိုင်ပွဲစုံ မှာ သုံးဂိုးသာသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး ဂိုးဖန်တီးမှု ခုနှစ်ကြိမ်သာရှိခဲ့တဲ့ ဒေါက်ကလပ်ကော်စတာကို ဂျူဗင်တပ်အနေနဲ့ အဌားချရ တာက ဖီအိုရင်းတီးနားတိုက်စစ်မှူး ချီယေဆာကို ခေါ်ယူဖို့အတွက်ကြောင့်လို့လည်း သတင်းတွေက ဖော်ပြခဲ့ပါတယ်။
ဂျူဗင်တပ်က ဒေါက်ကလပ်ကော်စတာကို အပြီးသတ်ရောင်းချဖို့အတွက် အလိုရှိခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့် ကစားသမားကတော့ အဌားနဲ့ သွားရောက်ကစားပြီးမှ အပြီးသတ်ပြောင်းရွှေ့ဖို့ အလိုရှိခဲ့တာကြောင့် ပထမတစ်နှစ်ကို အဌားနဲ့ ပြောင်းရွှေ့ခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ ဒေါက်ကလပ်ကော်စတာဟာ ဘိုင်ယန်မြူးနစ်နဲ့ ဘွန်ဒက်လီဂါချန်ပီယံ နှစ်ကြိမ်၊ ဂျူဗင် တပ် နဲ့ စီးရီးအေချန်ပီယံ သုံးကြိမ်ရရှိထားခဲ့သူလည်း ဖြစ်ပါတယ်။
ဂျူဗင်တပ်အသင်းဟာ ဖီအိုရင်တီးနားက ချီယေဆာကို ခေါ်ယူဖို့အတွက် ဒေါက်ကလပ်ကော်စတာအပြင် ရူဂါနီကို ရန်း နက်စ်၊ ဒီဆီဂလီယိုကို လိုင်ယွန်အသင်းတွေထံ အဌားချခဲ့တယ်လို့လည်း သိရပါတယ်။ အခြားသတင်းဌာနတစ်ခုကတော့ ဖီအိုရင်တီးနား တိုက်စစ်မှူး ချီယေဆာအနေနဲ့ ဂျူဗင်တပ်အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ဖို့အတွက် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့ပြီးလို့ လည်း ဖော်ပြနေကြပါတယ်။